Codad+sawirro:Xarakada Al Shabaab iyo Qeyb Kamid ah Dariiqda Suufiyada oo is Faham dhexmaray.
Sunday July 27, 2014 - 12:58:59 in Wararka by Super Admin
Mas'uuliyiin katirsan shabaabul Mujaahidiin ayaa ka qeybgalay xerista dowro 10 cisho Baraawe kaga socotay xerta saddex sheekh oo kamid ah culimadda Suufiyada.
Sheekh Cali Maxamuud raagge oo ah afhayeenka shabaabul mujaahidiin ayaa xeristaa dowrada ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabatay oo uu kusoo hadal qaaday hadafka iyo ujeedka ay udagaalamayaan.
Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa umahadceliyay culimada xertooda dowrada loo soo gebagabeeyay isagoo sheegay in wado cusub ay ufureen culimada kale ee iyaga lamidka ah.
Sheekha wuxuu la dardaarmay xerta suufiyada Dowrada loo soo gunaanaday oo tiradoodu ay gaareyso 145 ruux, isagoo usheegay in cilmiga uusan dhamaan iyaguna laga dooneyn inay sii tiigsadaan darajada kale ee cilmiga oo ubaahan sabar iyo dulqaad.
"waxaad baranaysaan waa wax weyn, hadaan rabno inaan ku gaarno darajada lagu sheegay waa inaan ikhlaas ku dadaalno” ayuu yiri sheekh Cali.
"Hadafka laga leeyahay dagaalka aynu ku jirno waa in alaah kaligiisa adoomo loo noqdo oo aan wax kale lala wadaajin taasi ayuuna allaah quraanka ku sheegay”ayuu sheek Cali usheegay xerta.
Xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa laga gudbiyay warar sheegaya inaysan ogoleyn fiqiga iyo cilmiga intiisa kale.
"ikhwaani warkaasi waa war sheydaan iyo gaalo ay rabto,ujeedkuna yahay in nala kala geeyo”ayuu sheekh Cali ugu laab qaboojiyay xerta iyo culimadooda isagoo ka jawaabayay warka laga faafiyay.
Afhayeenku Xerta wuxuu usheegay cilmigu inuu ubaahanyahay hirgalin iyo difaacid isagoo tusaale ugu soo qaatay waxa ku dhaliyay in camalka jihaadiga Soomaaliya kasocda uu kusoo biiro.
Sheekh Axmed Kulaale oo kamid ah Culimada suufiyada ugu caansan Gobalka Shabeelaha Hoose islamarkaana xertiisa ay kamid ahayd kuwa dowrada qaatay ayaa goobta ka jeediyay kalimad qoto dheer oo uu ardaydiisa ku dhiiragaliyay inay qaataan oo ay ku dhaqmaan casharada ay ku qaateen dowradda.
"Hima sare ayaa la idinka rabaa oo diinta dadka aad ku gaarsiinaysaa,Jihaadka ayaana ugu weyn himada sare, waa inaad wax kasta barataan xitaa sida qaraxyada loo sameeyo"ayuu yiri Sheekh Axmed Kulaale.
"Qoriga iyo seefta waa in aad qaadataan,waxaad tihiin dad badan, waxaa la idinka rabaa in dhinac kasta aad kasoo baxdaan”ayuu sheekh Axmed Kulaale xertiisa ku yiri.
Qaar kamid ah xerta ayaa goobta ka jeediyay hadalo ay kaga hadlayaan waxyaabaha ay ka faaideen dowradda.
Ugu danbeyntii qof kasta oo kamid ah Xerta iyo Culimada Suufiyada waxaa la siiyay dhar ay ku ciidaan maalmaha ciida oo nagu soo wajahan iyadoo loo sameeyay balan qaad kale oo muhiim ah.
Kulamada Nuucaan ah ayaa meesha kasaaraya warar culimo dowladda taabacsan ay ka gudbiyaan shabaabul mujaahidiin iyagoo ku duray inaysan tixgalin uheynin culimada madaahibta kale heysata oo suufiyadu ay kamid tahay.
Dhageyso Kalimada Sheekh Cali Maxamuud Raagge.
Dhageyso Kalimada Sheekh Axmed Kuulaale.
Dhageyso Codadka Xerta Suufiyada.
Qeybta Hoose Ka Daawo Sawirada Kulanka.
Xerta oo Daawanaya Dhar Ciid oo Loo qeybiyay
Xerta oo Ku Faraxsan Dharka Ciidda
Sawiradaan waa saddexda sheekh Ee Xertooda Dowradda qaatay